नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिकाका नागरिकहरुको सेवक भएर काम गर्नेछौँ : श्याम कृष्ण पौडेल
सोमबार, असोज ५, २०७७ ०८:३८:३८ युनिकोड
शुक्रबार, भदौ २६, २०७७ Dhading Sanchar
धादिङ,२६ भाद्र ।
धादिङको नेत्रावती डवजोङ गाउँपालिका कोरोना रोकथाम तथा न्युनीकरण गर्नको लागि गाउँपालिकाले विभिन्न कार्यक्रमहरु सन्चालन गरीरहेको छ । कोरोना भाईरसबाट बच्न सुरक्षाको उपायहरु अवलम्वन गर्न र स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै समस्या भए नजिकैको स्वास्थ्य संस्था जान वा नेत्रावती डवजोङ गाउँपालिकामा सम्पर्क गर्न गाउँपालिकाबासीहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
नेत्रावती डवजोङ गाउँपालिकामा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि गरीएको प्रयास र समग्र विकास निर्माण तथा योजनाको विषयमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत श्याम कृष्ण पौडेल सँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अशं :
१.पहिलो पटक सरुवा भएर आउँदा धादिङको बारेमा कस्तो सोच्नु भएको थियो ?
म पहिला कुसे गाउँपालिकामा काम गर्दा त्यहाँ अत्यन्तै दुर्गम थियो । जहाँ भर्खर मात्रै सडक पुगेको थियो । मैले त्यहाँ दुई महिना सम्म मात्रै काम गरे । त्यसपछि मेरो धादिङ सरुवा भयो । जब धादिङमा मेरो सरुवा भयो मैले सोचेको थिए,धादिङ जाजगरकोट जतिको विकट जिल्ला होईन किनकि काठमाण्डौं,पोखरा जानको लागि त्यहीँ हुदै जानुपर्ने हुन्छ भन्ने सोचेको थिए ।
जति पनि सचेतनाका स्तर जाजरकोटमा कमी रहेको छ त्यो भन्दा अलि फरक छ त्यहाँ भन्दा सहज रुपमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने लागेर नै नेत्रावती डवजोङ गाउँपालिका रोजेको थिए । यहाँ आउँदा मैले सोचेको भन्दा पनि फरक पाए । यहाँ उपभोक्ता समितिले पनि योजनाहरुमा लागत सर्वे गर्नुपर्ने र योजनाको हकमा विकृती भनेको न्युन छ । यस अर्थमा छ कि यहाँ हाम्रो काम गराई लागत अनुसार खर्च त्यही अनुसार भुक्तानी हुन्छ । त्यसलाई म आए पश्चात् बढि निरन्तरता दिईएको छ ।
२.नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिकाले कोरोना रोकथामको लागि कस्ता–कस्ता कार्यक्रम गर्यो र अहिले सम्मको अवस्था के छ ?
नेपाल सरकारले चैत ११ पश्चात् लकडाउन जारी गरिरहेको समयमा हाल सम्म पनि कायम रहेको छ । त्यसबाट नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका अछुतो रहने अवस्था रहेन । नेपाल कै तेस्रो संक्रमित व्यक्ति नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका वडा नं २ का व्यक्ति थिए । हालसम्म कोरोना संक्रमित ९ जना रहेका छन् त्यसमध्ये ७ जना काठमाण्डौंको विभिन्न अस्पतालमा उपचार गरिरहनुभएको छ । एक जना मात्रै वडा नम्बर ४ मा होम क्वारेन्टाईनमा रहेको अवस्था छ ।
विशेषत चैत ११ गते पश्चात् सुरुमा नै गाउँपालिकाले गाउँपालिका स्तरीय कोरोना नियन्त्रणको समितिको बैठक बस्यौं ।त्यसपछि गाउँपालिकामा रहेका लकडाउनले आफ्नो रोजिरोटी खोसिएका वर्गहरुलाई नेपाल सरकारले निर्देशन गरे अनुरुप हामीले राहत वितरण गरेका थियौंँ ।त्यस क्रममा के देखियो भने राहत वितरण लक्षित वर्गहरुमा देखिएन । धनी वर्गहरु राहत वितरणमा संलग्न भएको देखियो । त्यसपछि हामीले श्रममा आधारित राहत कार्यक्रम अगाडी बढाएका थियौँ ।
हामीले मजदुर वर्गहरुलाई नै निर्धारण गरेर १२ लाख ६२ हजार १ सय ६२ जनालाई कार्यक्रम सफल गरि भुक्तानी दिएका थियौं । हामीले दिर्घ रोगीहरुलाई एक महिनाको लागी निशुल्क औषधि वितरण पनि गरेका थियौँ । त्यसबाहेक हामीले कोरोनाको समयमा सबै व्यक्तिहरुलाई निशुल्क रुपमा उपचार गर्न जानको लागि एम्बुलेन्स खर्च गाउँपालिकाले नै व्यहोरेको थियो । यातायात खर्च पनि गाउँपालिकाले व्यहोरेको थियो । कोरोना नियन्त्रण गर्न गाउँपालिका हरदम अगाडी बढिरहेको छ । यसमा जे जति सफलता मिलेको छ त्यो सबै जनप्रतिनिधी,स्वास्थ्यकर्मी र हाम्रो कर्मचारीहरु लगाएत हाम्रो सिङगो एकताले सफल भएको हो ।
३.अहिले सम्म नेत्रावतीमा कोरोना संक्रमण समुदायमा फैलिसेकेको छैन होईन ?
सुरुमा देखिएको संक्रमित निको भैसकेको अवस्था छ । हाल हामीसँग ९ जना संक्रमित भए पनि ७ जना काठमाण्डौंमा रहेको एक जना होम क्वारेन्टाईन उहाँको स्वास्थ्य स्थिती समेत सफल भएकोले थप कोरोना संक्रमित पोजेटिभ नदेखिएकोले गर्दा समुदाय स्तरमा गईसेकेको भन्न प्रतिपादक होला भन्ने मलाई लाग्छ ।
तथापी हामीले पिसिआर चेक जाँचलाई पनि अगाडी बढाईरहेका छौंँ। हाम्रो गाउँपालिकामा रहेका कर्मचारी,जनप्रतिनिधीहरु र केहि शंकास्पद देखिएका व्यक्तिहरुमा गरेर १ सय ५१ जनालाई पीसिआर टेष्ट गरेर पठाईसकेका छौं। त्यसमध्येमा एकजना मात्रै पालिका बाट टेष्ट गर्दा वडा नम्बर ४ मा देखिएको थियो । त्यसबाहेक आजको दिनसम्म समुदाय स्तरमा जाने लक्षण देखिएको छैन ।
४.अहिले सम्मको नेत्रावतीको विकासलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
म नेत्रावती डवजोङ गाउँपालिका आउँदा सुरुमा विकास निर्माण अगाडी बढाउदा मलाई पनि एक चुनौति थियो । किनकि पहिलो कुरा भुगोल बुझ्न समय लाग्छ,जनप्रतिनिधी,कमर्चारी,कार्यवातावरण शैलि त्यसरी नै हामीले काम गर्छौ । तथापी कर्मचारीको सुमधुर वातावरण छ,लगनशिलता छ, जनप्रतिनिधीहरको सहयोग र साथ आत्मियता छ । त्यस पश्चात् जे जति नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिकावासि जनताहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुको विकासको मुलधारमा समेट्ने तिव्र ईच्छा शक्ति छ त्यसलाई नै अगाडी बढाउने मौका पाए ।
त्यसै हिसावले पनि यो लकडाउनको समयमा पनि गत वर्ष नेपाल सकारबाट,आन्तिरिक स्रोत, संघ र प्रदेश सबै गरि हामीले कुल बजेटको चरणमा ०.५ प्रतिशत खर्च गर्न सकेका छौं । यो भनेको कोरोना संक्रमणको चरणमा चुनौती पुर्ण काम हो । तथापी हामीले हाम्रो विकास निर्माणको कामलाई सामाजिक दुरी कायम राख्दै अगाडी बढाउन सफल भएका छौँ । मलाई आशा लाग्छ नयाँ आर्थिक वर्षमा शतप्रतिशत नै सफल हुन सक्छौं ।
५. गाउँपालिकाको भवन निर्माणको काम के–कस्तो भईरहेको छ ?
गाउँपालिकामा म आईसकेपछि फागुन पश्चात् २२ गते हामीले सम्पुर्ण जनप्रतिनिधी, जग्गादाताहरु, गाउँपालिकाको कर्मचारीहरु मिलेर सानो भेला गरेका थियौँ । उहाँहरुले पहिला नै निर्धारण गरेको २५ रोपनी जग्गा दिने भन्नुभएको थियो त्यो अनुसार छिटो भन्दा छिटो प्राप्त गर्न सक्छौं भन्ने थ्यो तथापी समयमा नै जग्गा अनुकुल अनुसार प्राप्त नभए पश्चात् गाउँपालिकाले हाल भईरहेको जग्गामा नै अगाडी बढाउने गरि जिल्ला समन्वय समितिको मौज्जात कोष बाट लगेर ठेक्का अगाडी बढाउने प्रक्रियामा रहेको छ ।
सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्य उहाँहरुले तत्कालै बजेट निकाशा गरिदिने कुरा छ ।गाउँपालिकाले यस वर्ष १ करोड ३५ लाख रुपैँया त्यसैको लागि सम्पर्क अनुदान छुट्याएको अवस्थामा यसवर्ष गाउँपालिकाको भवन प्रक्रिया अगाडी बढ्छ । गाउँपालिकाको सुरक्षा चौकीको भवन निर्माणको लागि कुरा गरिसकेका छौँ ।
६.यस वर्ष शिलान्यास गर्न सकिन्छ ?
यो वर्ष गाउँपालिकाको भवन ठेक्का अगाडी लाग्छ । हामी दशैं भन्दा अगाडी नै ठेक्का अगाडी बढाउन सक्छौँ । यो आर्थिक वर्षमा एक तला सम्मको भए पनि बनाउने छौँ । अहिले गाउँपालिका भाडामा रहेको छ । गाउँपालिकावासिहरुलाई के भन्न चाहान्छु भने गाउँपालिकाको भवन अब छिट्टै बन्ने छ । निकट भविष्यमा नै भवन निर्माण भएको देख्न सक्नुहुन्छ ।
७.अब केहि समस्या छैन जग्गा प्राप्त भईसकेको छ ?
दुई करोड भन्दा माथिको हुने वित्तिकै हामीले ईविडिङ गर्नु पर्छ यसमा कसलाई पर्छ भन्ने कुरा सराकारी नियम अनुसार नै जान्छ । कम्तिमा पनि ३० जति लाग्छ । जसले न्युनतम सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ वमोजिम हाल्नुहुन्छ उहाँले नै ठेक्का प्राप्त गरेपछि गाउँपालिकामा कुनै संकोच रहदैन । हाल सम्म पनि गाउँपालिकाको भवन निर्माणको लागि सरकारी नापजाँच गर्ने भनेर मिति तोकेको पनि हो लकडाउनको कारणले गर्दा गर्न सकिएन । निकट भविष्यमा नै हामीले गाउँपालिकाको ठेक्का अगाडी बढाउने छौँ ।
८.गाउँपालिका सँगैं प्रहरी कार्यलयको भवन पनि निर्माण गरिन्छ होईन ?
गाउँपालिकाको लागि जति पनि जग्गा प्राप्त भएको छ,२२ रोपनी जग्गा त्यसमध्ये ३ रोपनी जग्गा प्रहरी चौकीलाई दिने भनेर छुट्याएका छौँ । त्यो गाउँपालिकाको जग्गा भित्र नै हुने छ ।
९.अहिले सम्म खानेपानीको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?
हालसम्म गाउँपालिकामा एक घर एक धारा खानेपानी पु¥याउने अभियान गाउँपालिकाको रहेको छ । त्यही अनुरुप नै यसपालि पनि १३ वटा खानेपानीको योजनाहरु थपिएको छ । केहि ठाउँमा समस्या परेता पनि उक्त ठाउँमा खानेपानीको मुल ल्याएर पु¥याउने छौँ । खानेपानीको मुहानमा कसैको हकदारी नहुने गरि यस आर्थिक वर्षमा शतप्रतिशत नभनौं हामी लक्ष्यको नजिक पुग्ने छौँ ।
१०.आगामी योजनाहरु के छ खानेपानीको विषयमा ?
हामीकहाँ कटुन्जे डिपबोरिङ खानेपानी संचालनमा आएको छ । डिपबोरिङ भनेको हेर्दा सुरुमा दिर्घकालिन देखिन्छ,पानीको मात्रा ठुलो आएता पनि प्रकृतीको संरक्षणको पर्यावरणको हिसावले यो अनुकुल होईन । आरविटि नै हाम्रो उपयुक्त माध्यम हो । हामी कहाँ पानीको मुहान भएको हुनाले हामीले डिपबोरिङ योजना राखेका छैनौँं ।
११.सडकको कुरामा बाह्रै महिना चल्ने बनाउनको लागि कस्तो रणनिती बनाउनु पर्ला ?
गाउँपालिकाको केन्द्र सम्म पुग्न साविकमा केहि समस्या भए पनि हालको अवस्था सोध्नु भएको छ । विशेष गरि भ¥याङ भुरुङ देखि कटुन्जे सम्मको मध्यपहाडी लोकमार्ग छोएको अवस्थामा हामीले दैनिक रुपमा सडक चल्न सक्ने बनाउन योजना बनाएका छौँ । टोड्के देखिको कुभिन्डे सम्मको पालिकाको भूभाग रहेको छ त्यहाँ ग्रावेल भईसकेको अवस्था छ । यसबाहेक थर्र्पु देखि ताङजोमाने सडक गाउँपालिका सम्म आउन सक्ने भएकोले यो वर्ष केहि काम हुन्छं । मध्यपहाडी लोकमार्गको ठेक्का अगाडी बढ्ने छ,पिच हुने छ । हामीले दिर्घकालिन रुपमा ठुलो खर्च गर्न सक्ने छैनौ ।
१२.अहिले विग्रीएका सडकहरु दशै अगाडी सरसफाई हुन्छ कि हुदैन ?
गाउँपालिकाले सफाई गर्नको लागि भनेर मर्मत सम्भार कोषमा ३० लाख विनियोजन गरेको अवस्था छ । त्यही अनुुसार नै हामीले खुल्ला रुपमा दर रेट पेस भए मध्येमा गाउँपालिकाको निर्णय भदौ ११ गते बाट निर्णय भएर स्वीकृत भईसकेको अवस्था छ । विशेष गरि मुख्य मुख्य बाटोहरु सफाई गर्ने भनेर गाउँपालिकामा भनिसकेका छौं । सकभर हामी बजेको परिधि भित्र रहेर गर्छौ । यदि सम्भव भएन भने गाउँपालिकाले निशुल्क रुपमा बाटो सुधार गर्नेछ । दशैंमा बाटोको अवरोध रहदैन ।
१३.बाह्रै महिना सवारी चल्ने गरि बाटोको स्तरोन्नतीको लागि केहि सोच्नुभएको छ ?
पहाडी भूगोलमा ढलान गर्नुपर्ने कि त पक्की पिच गर्नुपर्ने । अन्यथा यो कच्ची बाटोको भरपर्दो नदेखिने भूगोलमा बढि मात्रामा पानी धेरै पर्ने भएकाले गाउँपालिकाका जति पनि नागरिकहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुले सोझै गाउँपालिका बाट सेवा लिन नपाएको अवस्था हो किनकि वर्षामा सम्भव हुदैन आउनको लागि । हामीले जहाँ–जहाँ सडकहरुमा खाल्टा खुल्टीहरु रहेको त्यसलाई पुरै ग्रावेल गर्ने छौँ ।
१४.कृषि पेशालाई आत्मसम्मानको पेशा बनाउन के गर्नु पर्ला ?
नेपालीहरुको मानसिकताले नै गर्दा हामी पछाडी परिरहेका छौँ । पढेलेखेका व्यक्तिहरुले खेती गर्न नहुने जुन सोच छ,त्यसले गर्दा हाम्रो भान्सामा आफ्नो उत्पादन नपाकेर विदेशी उत्पादन पाकीरहेको हुन्छ । हाम्रो गाउँपालिकाले फरक कार्यक्रमहरु ल्याएको छ । फरक कार्यक्रमहरुमा संकलन केन्द्र गत वर्ष नै निर्माण गरेका छौँ ।
त्यस्तै कृषि बजार प्रर्दशनी गर्ने भनेर हामीले बजेट छुट्याएका छौँ । कृषकहरुले जे जति उत्पादनको छ त्यो सम्बन्धी स्थानमा वितरण हुन्छ । यदि वितरण हुन नसकेको अवस्थामा गाउँपालिकाले हेर्ने छ । उत्पादनको मात्रा हेरेर तरकारी बालीलाई प्रतिकेजी ५ रुपैँया दिने कार्यक्रम गाउँपालिकाले छुट्याएको छ ।
कृषि कर्मचारी भनेको नमुना अनुकरणीय हुनुपर्छ । यसपालि गाउँपालिकाले टनेल निर्माण गरेर विउविजन वितरण गर्ने योजनामा रहेको छ । बाँझो जग्गामा उत्पादन हुने किसिमको समुहिक रुपमा खेती गर्न सकियो भने गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने छ । कृषिमा केहि गर्छु भनेर लाग्नुभएकाहरुको लागि लागि शेयर सदस्य बनेर गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने छ ।
१५.प्रतिकिलो पाँच रुपैँया भन्नु भएको छ कस्तो हो ?
हिजो कृषकहरुले नगदे वाली भन्दा पनि छाकटार्ने अब उहाँहरुले व्यवसायिक रुपमा खेती गर्नुभएको छ र विक्रि हुन नसकेका कुराहरु गाउँपालिकाले मोबाईल एम्बुलेन्सको रुपमा तरकारीहरु सदरमुकाम समम विक्रि गर्नुपर्छ । मुख्य वितरण स्थल भनेको गाउँपालिकाको पेरिफेरि नै हो । सामुहिक रुपमा सरकारको मापदण्ड अपनाएर व्यवसाय गर्नुभएको छ भने गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने छ ।
गत वर्ष नै हामीले यो कार्यक्रम लागु गरिसकेका छौँ । वडा नम्बर १ देखि ५ सम्मका कृषकहरुको लागि २ लाख सम्मको अनुदान बाढेका छाँै । गत वर्ष सोझै नियम अनुसार दर्ता भएकाहरुलाई दिएका थियौँ भने अहिले सहकारीमा आवद्ध भएकाहरुलाई दिएका छौँ । सबै कृषहरुको जिवनस्तर उकास्न पर्छ भन्ने हिसावले गाउँपािलका लागि परेको हो ।
१६.गाउँमा नै कृषि गर्छु भन्नेलाई गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने छ ?
जति पनि कृषक दाजुभाई तथा दिदिबहिनी हुनुहुन्छ कृषि पशुपालनमा तपाईहरु अगाडी बढ्नुभयो भने गाउँपालिकाले सहयोग गर्नेछ । सहकारी पनि कतिपय दर्ता भएका छन्, कतिपय निष्कृय छन् त्यसलाई नियमन पनि हुने सहकारीमा रहे पछि केहि थप सहयोग हुने । सहकारी मार्फत् नै सहकारीका व्यक्तिहरुको जिवनस्तर उकास्नको लागि गाउँपालिकाले कार्यक्रम ल्याएको हो ।
१७.पशु सुत्केरी भत्ता कार्यक्रम लागु गर्नुभएको थियो कस्तो हुने रहेछ यो कार्यक्रम ?
कृषकहरुलाई कृषि तथा पशुपालनमा अभिवृद्धि गर्नको लागि यो कार्यक्रम ल्याएको हो । यो पशुसुत्केरी भत्ता कार्यक्रम यस्तो देखियो कि भत्ताको लागि भए पनि पाल्नुपर्छ भन्ने देखियो कमै मात्रामा व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने कम पायौँ । यसपालि हामीले पशुबिमा, गोठको सुधार र पशु सुत्केरी कार्यक्रमलाई हामीले पेन्डिङमा राखेका छौँ ।
त्यसबाहेक हामीले नयाँ कार्यक्रम भनेको पशु स्वास्थ्य शिविर हामीले गर्दै छौँ । गाउँपालिकामा जति पनि भेटेरिनरीको समस्या भएको छ त्यो पनि मिलाउने छौँ । साथै पहिलाको भन्दा फरक ढङ्गले अगाडी बढाउदै छौँ ।
१८.शिक्षाको क्षेत्रमा कस्तो देख्नु भएको छ गाउँपालिकामा ?
शिक्षाको लागि एउटा संस्थासँग सहकार्य गरेको छ । त्यस हिसावले जति पनि गाउँपालिकावासी विद्यार्थी भाईबहिनीहरु हुनुहुन्छ,तपाईहरुको पढाई अवरोध भएको छ,त्यसमा तपाईहरुले साथ दिनुहुने छ भन्ने आशा छ । हामीले अब जिवन्त शिक्षा लिनुपर्ने आवश्यक छ यो तीन घण्टा लेखेर होईन ।
हामीले विद्यार्थीहरुलाई आधुनिक कुरामा अग्रसर बनाउनु पर्ने हुन्छ । हामीले सम्पुर्ण विद्यालयका प्रअ सँग शिक्षा शाखा मार्फत् कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने निर्णय गरेका छौँ । विद्यालयको गुणस्तरको वारेमा जानकारी लिनको लागि हामीले यस्तो निर्णय गरेका हौँ । त्यसबाहेक गाउँपालिकाले स्मार्ट टिभि मार्फत् कक्षा संचालन गर्ने योजनामा रहेको छ । हामीले प्रविधि मैत्री शिक्षा बनाउन लाग्दै छौं ।
१९.काम गर्ने क्रममा त्यस्तो केहि अप्ठ्यारो महशुस भएको छ ?
आम मानसिहरुको बुझाई जुन सरकारी कर्मचारी प्रति नकारात्मक नै रहेको छ । त्यस हिसावले हामीले कर्मचारीहरुले परिवर्तन आत्मसाथ गर्न सकिएन भने चुनौती सिर्जना हुन्छ । सेवा भन्ने कुरा आफुले जोगाउन खोज्यो नियुक्ति पत्रले समस्या पार्ने रहेछ । समस्या र चुनौती पनि मैले खेल्न रुचाउछु ।
त्यस हिसावले त्यहाँ सम्म पुग्नु परेको अवस्था छैन । त्यो सबै गाउँपालिकावासी र जनप्रतिनिधीहरुले नै हो । बजार अनुगमनको कुरा कतिपय सामाग्रीहरुको म्याद गईसकेको हुन्छ त्यसको लागि हामीले अनुगमन गरेका हुन्छौँ । कोरोनाको कारणले गर्दा केहि समय रोकिएको हो । कतिपय ठाउँमा आफै गएर हेर्न सकियो भने सजग हुने अवसर हुन्छ । हामीले उत्कृष्ट काम गर्ने उपभोक्ता समितिलाई हामीले सम्मान गर्ने छौँ । विगतको वर्ष जस्तै यसपालि पनि अगाडी बढ्छ ।
२०.भ्रष्टाचार रोक्नको लागि कसरी नागरिक सम्म पुर्याउन सकिएला ?
भ्रष्टाचार भनेको एकल व्यक्ति बाट मात्रै हुने होईन त्यसको लागि समुह नै रहेको हुन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि जति पनि गाउँपालिकावासीहरु कहाँ के कति बजेट परेको छ, कहिले सम्पन्न हुने छ त्यसमा कस्तो खालको गुणस्तर हुने छ,त्यहाँ एउटा सूचनाको हक हुन्छ त्यहाँ बाट प्राप्त भएन भने वडामा सुचना अधिकारी हुनुहुन्छ उहाँहरुले सूचना दिनुहुन्छ ।
त्यस बाट नै हामीले के भईरहेको छ थाहा पाउन सक्छौँ । कति अवस्थामा आफुलाई काम गर्न असहज भयो भनि भ्रष्टाचारको अभियोग लाउन पनि सक्छन् । यदि त्यस्तो देखिएको छ भने जानकारी दिनुभयो भने हामीलाई पनि थप सहयोग मिल्ने छ । पहिला आफुले भ्रष्टाचार गर्दिन भनेर लाग्नुपर्छ ।
२१.गाउँपालिकाको योजना कस्तो छ ?
विशेष त गाउँपालिकाको तथ्याङ्क तयार गर्नुपर्छ भनेर हामीले सूचना प्रविधि मैत्री विना काम गर्न सक्दैनौ । सबै क्षेत्र समेटेर डिजिटल प्रोफाईल संचालन गर्न लागेका छौँ । गाउँपालिकामा जे जति आउँछ राजस्व त्यो गाउँपालिकामा नै वसेर हेर्न मिल्ने छ । घट्ना दर्ताको पनि अनलाईन गर्ने छौँ । हामी राष्ट्रिय बैंकको शाखा खोल्न लागिरहेका छौँ ।
हामी कहाँ राहत बाड्ने काम गरिरहेका छौँ । हामीले विपद आउदा कसरी सुरक्षित रहन सकिन्छ भन्ने विषयमा कार्यक्रम संचालन गर्ने छौँ । विपद व्यवस्थापनको लागि गाउँपालिकाले बजेट छुट्याएको छ । कर्मचारी विना प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत अगाडी बढ्न सक्दैन । उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई पनि जनहि १० हजार दिनेछौँ ।
२३.अन्त्यमा हामीलाई रेडियो सुनेर वस्ने नेत्रावती डवजोङ दाजुभाई दिदिबहिनीहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
सर्व प्रथम त नीलकण्ठ एफ.एम सुनेर वस्नुहुने सम्पुर्णलाई के भन्न चाहन्छु भने विकास भनेको सबैको लागि हो । हिजो विकास आर्थिक विकासलाई लिने गरिन्थ्यो आज मानविय चेतनालाई लिईन्छ । त्यसको लागि शैक्षिक चेतना स्तर हुनसक्छ, सामाजिक सँस्कृत चेतनाको विकास हुन सक्छ । त्यसैले विकासमा सबैको साथ र सहयोग आवशयक छ । त्यसको लागि सबै दाजुभाई दिदिबहिनीहरुलाई विकासको लागि एकजुट हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।